Ciyaartoy Qudha Ka Jaray Garsoore Isku Deyey In Uu Casaan Siiyo Iyo Dhaqamada Waallida Ah Ee Soo Baxaya
HomeChampions LeagueCiyaartoy Qudha Ka Jaray Garsoore Isku Deyey In Uu Casaan Siiyo Iyo Dhaqamada Waallida Ah Ee Soo Baxaya
15/03/2015 Abdiwahab Ahmed
Saad dhinka dhinaca bidix taagan oo ay silsiladdu ku xidhan tahay
Subaxnimo Axad ah, xagaagii hore, John Bieniewicz oo ahaa garsoore dhexdhexaadiya ciyaaraha Michigan United Soccer League ee dalka Maraykanka ayaa kaadh Huruud ah siiyey ciyaartoy khalad kula kacay laacib ay iska soo horjeedeen.
Ciyaartoygaas oo lagu magacaabo Bassel Saad ayaa dabeeto bilaabay in uu ku qayliyo, isla markaana caayo garsoore Bieniewics kaas oo isna go’aansaday in uu jeebadda gacanta geliyo oo uu ku aamusiiyey kaadh casaan ah. Ka hor intii aanu John Bieniewicz soo saarin kaadhka casaanka ahba, ciyaartoy Saad ayaa feedh ku miisay oo dhulka ugu tuuray, isla markaana waxa xaallad miyir la’aan ah galay garsoore John Bieniewicz. Si degdeg ah ayaa loogula cararay Cisbitaalkii ugu dhowaa hase yeeshee nasiib darro kumay guuleysanin in ay badbaadiyaan, waxaanu ku geeriyooday Cisbitaalka la dhigay.
Jimcihii toddobaadkan ayaa Saad la hor geeyey maxkamadda si loo soo afjaro
Dacwad ku socotay muddo taas oo ah in uu dilay garsooraha. Waxa maxkamadda fadhiday haweenaydii uu qabay garsooraha la dilay ee John Bieniewicz, taas oo daaqad ka daawanaysay ninka weerarka bahalnimada ah ku dilay saygeeda.
Haweenaydaas oo lagu magacaabo Kris Bieniewicz ayaa adkaysan kari weyday intii ay maxkamaddu socotay waxaana ay isku dayday in ay gacanteeda ula tagto Saad markaas oo inta ay kacday ay jeebaddeeda kala soo baxday wax ay ku soo qarsatay, laakiin umay suurtogelin in ay gaadho, waxana ka qabtay booliskii maxkamadda joogay.
Kris Bieniewicz ayaa waxa ay jeebaddeeda ka soo saartay Kaadh casaan ah oo ah kii uu gadooday Saad waxaana intay la hor tagtay oo ay kor u taagtay ay ku qaylisay: “Waxa aan siinayaa Mr. Saad kaadhkii casaa ee ay ahayd in la siiyo”.
Kris Bieniewicz oo kor u haysa kaadh cas oo ay u taagtay Saad
Xaakimkii maxkamadda fadhiyey ayaa go’aamiyey in lagu xukumo Saad xadhig 15 sannadood ah oo xabsi ah.
Hab-dhaqankan ayuu garsooruhu sheegay in uu yahay mid ceeb ku ah kubadda cagta, isla markaana aan fool xumo kaliya ahayn balse dhalinyarada yaryar ku hoggaaminaya in ay sidan oo kale u dhaqmaan.
Wargeyska Dailymail oo warkan qoray, ayaa waxa uu sheegay in dhaqanka noocan ahi uu ku soo badanayo kubadda cagta ee dalka Ingiriiska. Waxa ay tusaale u soo qaateen ciyaartii FA Cup ee dhex martay Manchester United iyo Arsenal iyo waliba kulankii Champions League ee Chelsea iyo Paris Saint-Germain ee toddobaadkii hore.
Ciyaartooyada PSG ayaa marar badan ku buuqay iyagoo raxan ah garsoorihii dhexdhexaadinayay ciyaartaas. Sidoo kale ciyaartooyada Chelsea ayaa marar badan buuq ku abuuray garsooraha iyagoo raxan ciyaartooyo ahi ay ku urureen. Sidoo kale tababare Jose Mourinho ayaa lagu tilmaamay in uu dirqi isaga hayay garsooraha oo uu ku sigtayba in uu marar badan garoonka soo galo si uu ula dagaallamo garsooraha.
Ciyaartooyada PSG oo ku ururay garsooraha
Garsooraha dhexdhexaadinayay Chelsea iyo PSG oo uu dhashay wadanka Holland, laguna magacaabo Bjorn Kuiper ayaa muujiyey degenaan iyo go’aan adayg.
Dhinaca kale, ciyaar ka tirsanayd FA Cup oo Isniintii toddobaadkii hore dhex martay Arsenal iyo Manchester United, waxa kaadh casaan ah loo taagay laacibka Manchester United ee Angel di Maria, kaas oo markii kaadhka la siiyey si adag u mada-haraaday.
Di Maria oo laacaya garsooraha oo sii jeeda
Waxa la calaamadiyey Di Maria in isaga oo cadhaysan oo qabsaday xagga dambe ee dhabarka shaadhka uu xidhnaa garsoore Michael Oliver kaas oo isna inta uu istaagay oo uu soo jeedsaday jeebadda ka soo saaray Kaadh Cas oo uu isaga reebay Di Maria.
Garsooha oo Casaan u taagay Di Maria
Waxa kale oo jira ciyaaro badan oo garsooreyaashu dhibaato ku dareemaan, khaasatan waxa hab-dhaqanka noocan ah leh horyaallada aan aadka loo aqoonin ee qaaradda Yurub iyo waliba kooxda Barcelona oo marka uu garsooruhu khalad ku qabto dhamaantood ku soo urura isla markaana buuq ku abuura garsooraha si aanu ugu dhiirranin in uu mar kale go’aan noocaas oo kale ah qaato.
Detroit Pistons vs Portland Trail Blazers – Full Game Highlights | Feb 5, 2018
06/02/2018 Diiriye Ahmed
Arsenal vs Liverpool 3-3 All Goals & Highlights
22/12/2017 Abdiwahab Ahmed
Mustafi Iyo Sanchez Oo La Baxsaday Arsenal
18/11/2017 Abdiwahab Ahmed